TimescaleDB, yakavhurwa sosi dhatabhesi yekuchengetedza nguva dzakateedzana data | Linux Vakapindwa muropa
Kuburitswa kweshanduro nyowani yeTimescaleDB 1.7 yakaziviswa, shanduro mairi yakawedzera rutsigiro rwePostgreSQL 12 yakasimbiswa, pamwe nekushandurwa kwemamwe mabasa. Kune avo vasingazive nezve TimescaleDB, vanofanira kuziva izvozvo dhatabhesi rakagadzirirwa kuchengetedza nekugadzirisa dhata nenzira yenguva dzakateedzana (zvikamu zve paramende kukosha panguva dzakapihwa nguva, rejista inoumba iyo nguva uye seti yemitengo inoenderana nenguva ino).
Iyi fomu yekuchengetedza yakakwana yezvikumbiro senge masystem ekutarisa, mapuratifomu ekutengesa masystem ekuunganidza metric uye sensor mamiriro.
1 Nezve TimescaleDB
2 Chii chitsva muTimescaleDB 1.7?
3 Maitiro ekuisa TimescaleDB paLinux?
Iyo TimescaleDB chirongwa inoitwa seyekuwedzera kwePostgreSQL uye inogoverwa pasi peiyo Apache 2.0 rezinesi. Imwe yekodhi ine epamberi maficha inounzwa pasi peyako yakaparadzaniswa yeTimescale rezinesi (TSL), iyo isingatenderi shanduko, inorambidza kushandiswa kwekodhi mune yechitatu-bato zvigadzirwa, uye haitenderi kushandiswa kwemahara mune dhatabhesi eruzhinji (dhatabhesi senge sevhisi ).
Chikamu chinonakidza cheTimescaleDB, ndicho icho inokutendera iwe kushandisa yakazara SQL mibvunzo kuongorora iyo yakaunganidzwa data, kusanganisa iko kusununguka kwekushandisa kunoenderana nehukama DBMS nekukwanisa uye kugona kunowanikwa mune yakasarudzika NoSQL masisitimu.
Chimiro chekuchengetedza yakagadziridzwa kuti ipe yakakwira dhata yekubatanidza mwero. Inotsigira batch kuunganidzwa kwedatha seti, ichishandisa indices yakachengetwa mu RAM, ichidzora zvine mutsindo zvikamu zvekare, kuisa zviitiko.
Chinhu chakakosha cheTimescaleDB ndiyo Tsigiro yekuparadzanisa otomatiki(chikamu) chedata rondedzero. Iyo irinouya data rwizi inogoverwa otomatiki pakati pematafura akapatsanurwa.
Zvikamu zvinogadzirwa zvinoenderana nenguva (chikamu chega chega chinochengeta dhata yeimwe nguva yenguva) kana inoenderana nekiyi yekumanikidza (semuenzaniso chinongedzo chemidziyo, nzvimbo, nezvimwewo). Matafura akapatsanurwa anogona kutambanudzwa pamadhiraivha akasiyana kuti agadzirise mashandiro.
Pamibvunzo, dhatabhesi yakakamurwa inoita kunge tafura hombe, inonzi ine hypertable. Hypertable inomiririra chaiyo matafura akapatsanurwa mune data rinouya.
Chii chitsva muTimescaleDB 1.7?
Mune iyi vhezheni nyowani rutsigiro rweiyo kusangana pamwe nePostgreSQL 12 DBMS, nepo kutsigirwa kwePostgreSQL 9.6.x uye 10.x kwakadzikiswa, kunyangwe kune Timescale 2.0 chete kutsigirwa kwePostgreSQL 11+ kuchasara.
Izvo zvakare zvinoratidzika kuti akachinja hunhu hwemibvunzo nekuenderera mberi achiitwa akaunganidzwa mabasa (kuunganidzwa kweinoramba ichipinda data munguva chaiyo).
Mibvunzo yakadaro ikozvino inosanganisa maonero akavezwa nedata richangosvika iro risati raitwa (kare, kuunganidzwa kwaingovhara data rakatogadzirwa). Hunhu hutsva hunoshandiswa kune ichangobva kugadzirwa kuenderera kuunganidzwa.
Ukuwo, mamwe epamberi data data ehupenyu hwekutonga maturusi akaendeswa kune yeruzhinji vhezheni yemagazini yekutengesa, kusanganisira kugona kuumbiridza dhata uye marongero emitemo kufambisa data rekare (rinokutendera kuti uchengete chete data razvino uye kudzima otomatiki, kuwedzera, kana kuchengetedza zvinyorwa zvekare).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » TimescaleDB, yakavhurwa sosi dhatabhesi yekuchengetedza nguva dzakateedzana data